Zimbabwe Business News - Page 5 of 1045 - Zimbabwe Today
June 8, 2021	Business Comments Off on Zimbabwe: African Sun Moves to Take Over Dawn Properties Absolute Ownership
By Alois Vinga Listed hotelier, African Sun Limited (ASL) has announced its intentions to take full control of the business concern from Dawn Properties shortly after acquisition. Recently, the entire issued ordinary shares of Dawn were acquired in exchange for the issuance of the African Sun Limited ordinary shares listed …
June 8, 2021	Business Comments Off on Zimbabwe: Zera Reduces Diesel Price
The maximum price of diesel has fallen from US$1,32 to US$1,30 in the short term while petrol remains at US$1,33. The Zimbabwe Energy Regulatory Authority (ZERA) is encouraging operators to charge prices lower than the capped prices depending on their trading advantages. This is in fact now quite common since …
June 8, 2021	Business Comments Off on Zimbabwe: Illegal Gold Panners Defy Directive
By Mashudu Netsianda Bulawayo Bureau UNCONTROLLED illegal gold panning at Nugget Mine in Matobo District is continuing unabated, resulting in massive land degradation that has affected studies on crops at Matopos Research Institute Farm and caused the death of pedigree breeding livestock. The mine is situated at Matopos Research Institute …
June 7, 2021	Business Comments Off on Zimbabwe: Hwange Cancels Kamandama Commemorations
By Zvamaida Murwira Hwange Colliery Company has this year deferred commemoration of the Kamandama Mine disaster that had become an annual event aimed at reflecting the tragedy that claimed 427 lives of miners. In a statement, Hwange Colliery Company said the cancellation was occasioned by the desire to adhere to …
June 6, 2021	Business Comments Off on Zimbabwe: Uproar Over Chinese Mine in Hwange
By Silas Nkala HWANGE residents under the Greater Whange Residents Trust (GWRT) are opposed to plans by a Chinese coal mining company, Afrochine Smelting to mine at Deka Safari because of the area’s closeness to Sinamatela National Park. The residents recently took the same company to court for its exploration …
June 4, 2021	Business Comments Off on Zimbabwe: Unionists Face Arrest After Disrupting Wage Negotiations
By Alois Vinga UNITED Food Federation Allied Workers Union of Zimbabwe (UFFAWUZ) this week disrupted salary negotiations for the baking industry, a development that will further worsen the plight of over 3 000 workers in the sector. According to a police record filed under RRB 4694748 at Milton Park Police …
June 2, 2021	Business, Health & Fitness Comments Off on Zimbabwe: Doctors Deserve Highest Quality Working Conditions – President
June 2, 2021	Business Comments Off on Zimbabwe: Gold Miners Optimistic of 100 Tonnes Per Year
June 2, 2021	Business, Health & Fitness Comments Off on Zimbabwe: Mnangagwa, Chamisa Rush to Assist Stranded Mpilo Doctors
June 2, 2021	Business Comments Off on Zimbabwe: Damaged Roads Slow Down Grain Deliveries
Page 5 of 1,045« First...«34567	»	102030...Last »